FANTARO NY FAHAMARINANA - Dinika forum.serasera.org
FANTARO NY FAHAMARINANA
Fitohizan'ny hafatra : Re: FANTARO NY FAHAMARINANA
RBNIR - 08/11/2017 09:10
Esy aho le farasisan'i Paoly e
Raha tsy tianao i paoly dia izao...
Tsy i paoly irery ihany no nisehoany taorian'ny nahafatesany fa betsaka (oh i Jaona izay mitantara ny momba ny bokin'ny apokalipsy...
Ireto koa nisehoany,
« [Ary rehefa nitsangana tamin'ny marain'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, dia niseho voalohany tamin'i Maria Magdalena, ilay namoahany demonia fito, Izy] » (Marka 16:9)
« [Ary taorian'izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ny roa lahy aminy, izay nankany an-tsaha] » (Marka 16:12)
« [Rehefa afaka izany, dia niseho tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy Jesosy, raha nipetraka nihinana ireo; ary izy nanome tsiny azy noho ny tsi-finoany sy ny hamafin'ny fony, satria tsy ninoany ireo efa nahita Azy, rehefa nitsangana Izy] » (Marka 16:14)
Noho izany diso ny fampianarana milaza fa tsy tokony hiseho intsony IZY taty aorian'ny fahafatesany....
rhaj0 - 08/11/2017 19:31
rhaj0 he he he... tena matoki-tena fa mahay Baiboly izany i RBNIR an... izaho tsy mahay (sady tsy te-hahay) fa Ineny Gogola fotsiny no nanontaniako ee..
nanontaniako Ineny Gogola hoe, oviana i Jesosy no tezi-doza, namoaka ny tena toetra ratsiny, ary mila ho gaigy mihhntsy, hany ka nomantsamantsanany ireo Mpianany mampalahelo, izay mba nikezaka ihany ho'a, nefa dia tsy nahavita azy ee...
Dia hozy Ineny Gogola hoe..
zaahaaavoooo aaooo aamminn'i LLiiioookkaaa aanny @ foolloo llaatssakkaa faaheeffaaannyyyy ee..
Izzaayyy nooottaatterrin'i MMaaattiioo taammin'nnyyy diimmyy ssyy ffaahefaany h@ faahatelony ee..
Ka ahoana: hazavao indray hoe ireo Lioka sy Matio vavolombelona ireo ry RBNIR?
RBNIR Mitovy amin'ny fanazavana ilay marika ilay ao amin'ny lioka 9 sy matio e! olon-kafa no tena resahin'i Jesosy, fa ianao moa nihevitra fa ireo mpianatra no iantefan'ny teny....
Dia Ineny Gogola sy ny Mpandalina Baiboly eran-tany izany hono TSY mahay BAiboly noho i RBNIR ee...
Ao @ Lioka 9 anefa:
40 Nangataka tamin'ny mpianatrao aho mba handroaka azy, fa tsy nahafaka izy ireo. 41 Ary namaly Jesoa ka nanao hoe: Ry taranaka tsy mino sady ratsy fanahy, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo sy handeferako aminareo?
=== TSY t@ ilay rain-janak'olona i Jesosy no NItoetra sy HItoetra, fa t@ ireo Mpianany. Ireo Mpianany no mantsamantsanany io.
Jereo tsara indray ny tohiny:
44 (...) dia hoy izy tamin'ny mpianany: Alatsaho tsara ao amin'ny sofinareo izao rehetra izao, satria ... (blah blah blah)
=== TSY ilay rain-janak'olona no resahin'i Jesosy fa ny Mpianany. Mampianatra izy @ io.
Ka tsarovy mandra-pahatonganareo any @ fen'anana manjakizay ry RBNIR (sy HRNRN) aa... Rahefa "TSY MAHAFAKA" ny Lapesta sy ny Jamba Moana Marenina eraky Madaga ianareo, indrindra iHRNRN izay mihambo ho "Mpianatr'i Jesosy" io, dia ho tsenain'i Jesosy @ hoe:
Ry taranaka tsy mino sady ratsy fanahy
Ary Alatsaho tsara ao amin'ny sofinareo ry RBNIR sy HRNRN, fa efa "TSY mitoetra" aminareo RBNIR sy HRNR intsony i Jesosy. Teboka.
RBNIR - 09/11/2017 14:52
Araho tsara ilay tantara:
Ilay rain-janak'olona no "miresaka amin'i Jesosy" (fa tsy ny mpianatra).....
Niteny Jesosy hoe ry taranaka tsy mino......dia namaly io rain-janak'olona io ary amin'ny Mar.9 hoe « Ary niaraka tamin'izay dia niantso* ny rain-drazazalahy ka nanao hoe: Mino aho; vonjeo mba ho afaka amin'ny tsi-finoako.[*Ampio hoe: sady nandrotsa-dranomaso]. » (Mar.9:24)
Niaiky ilay rangahy fa tena tsy mino, ka nitomany hoe vonjeo mba ho afaka amin’ny tsi-finoako….
Tsy voasoratr'i Lioka io fa kosa nosoratan'i Marka tsara mba hilazana amin-tsika fa tena ilay rain-janaka no noresahiny teo....
Dia rehefa niantso vonjy sy nitomany ilay rangahy dia hoy i Jesosy hoe .......« ...... Ento ety ny zanakao. » (Lio.9:41)
Nofafanao moa ity farany ity satria tsy mety taminao........
rhaj0 - 09/11/2017 15:42
I Lioka no resahina, fa roritinao any @ Marka ny resaka, satria any no tiatianao ry RBNIR. Ka ario any azany i Lioka ee.. Izaho indray ve hanakana anao @ iznay ho'a ry RBNIR
Fa samy manana ny hitany i Lioka sy Marka, ary samy manana ny fitaterany ny naha-vavolombelona azy tao.
Raha ny filazan' ny Mpandinika (kristiana toa anao) aloha, dia ny Mpianatr'i Jesosy no nomantsamantsanany io, arak'io notantarain'i Lioka 9 io.
Fa tsy voalohany i Jesosy no sakay kely rano @ n'a pas toa io, Atsy @ Matio 8 indray, dia vakio tsara indray azany ry RBNIR:
Matio 8:23 Ary niondrana tamin'ny sambo kely izy ka narahin'ny mpianany. 24 Dia indro nisy tafio-drivotra mafy tamin'ny ranomasina, ka efa safotry ny onjan-drano ny sambo kely, ary izy anefa natory. 25 Dia nanatona azy ny mpianany, ka namoha azy nanao hoe: Tompoko, vonjeo izahay fa maty. 26 Ary hoy Jesoa taminy: Nahoana no saro-tahotra hianareo ry kely finoana?
Dia tena fomban'i Jesosy io mamelively ny Mpianany io.
1- Anarany fotsiny ireo Mpianany no ampianarina, manatrika ny Fampianarana sy izay Fahagangana ataony ao HONO, nefa dia mivaralila foana ireto izy, ary TSY mahafaka (aretina/devoly), TSY mahavita azy (miady @ rivo-doza), satria nahoana??
SATRIA "kely finoana" (Matio) na koa "tsy mino sady ratsy fanahy" (Lioka).
2- Fa raha izaho aloha dia tsy manome tsiny ny Mpianatra (dondrona). Amiko, rahefa tsy mahay ny Mpianatra rehetra, dia ny Mpampianatra no fôsika. Sady @ izay, raha "mahay ny zava-drehetra" ve izao "Mpampianatra Mahay" izao, dia TSY hainy fa TSY hahay anie ireto Mpianatra "dondrona"???? Dia mba entina @ halemem-panahiny ny resaka, fa tsy mantsamantsanana toa izao ireo Mpianatra mampalelo ireo??
RBNIR - 09/11/2017 15:49
E!! izay marina no mahavery anao rhajo!!! (elementaire B ange izany e, ny any amin'ny katesizy aza mahay an'izany)
Matio Marka Lioka ary Jaona, amin'ny ankapobeny mitantara zavatra iray ihany....
Jesosy (ny fiainany, ny toriteny nataony sy ireo asa lehibe nampanaovina Azy)....
Eto dia ohatra dia mitantara zavatra iray ihany i Marka sy lioka dia mbola mitantara an'io ihany koa i Matio
« Tompoko, mamindrà fo amin'ny zanako-lahy, fa mararin'ny androbe izy ka mahantra tokoa; fa matetika izy no mianjera ao amin'ny afo, ary matetika ao amin'ny rano. » (Matio 17:15)
« Ary nitondra azy tamin'ny mpianatrao aho, fa tsy nahay nahasitrana azy izy. » (Matio 17:16)
« Ary Jesosy namaly ka nanao hoe: Ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo? Mandra-pahoviana no handeferako aminareo? Ento aty amiko izy. » (Matio 17:17)
« Ary niteny mafy azy Jesosy, dia nivoaka taminy ny demonia, ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay ora izay. » (Matio 17:18)
Iray ihany no tantaraina eo (Zaza voan'ny androbe dia ny rainy izay mitaraina mafy amin'i JEsosy no mahazo kiana eo e!!!
Miverena mianatra hoy aho sao very ao ianao ry rhajo a!!! ny ankizy kely no ampianarina an'izany (sekoly sabata, na sekoly alahady....vitany tsianjery izany e!!!
rhaj0 - 09/11/2017 16:52
Sokiro h@ orijinaly azany ry RBNIR aa.. hainao ihany fa dada ka dadany ny censure sy manipulation ao, dia mody hoe, version nohavaozina isaka ny mihetsika.
Ilay Baiboly protestanta version farany vaovao io izao, inona daholo no "noapalesina" tao?? lasa tsy manompanompa intsony Jesosy ??? Ny rereko izao dia hoe, TSY Andrmntra intosny no iantsoana Azy fa Ny Tompo. Vasoka kely izany i Miharena eto fa tsy Ny Mpahary no noraisin'ny pasitera gasy. Sa diso aho?
Miharena - 09/11/2017 19:51
Raha ity lohahevitra ity indray aloha no resahana dia misy fivoarana ny zava-misy rehetra momba ny fahamarinana.
Ny fotoana nahafantarana ny Marina dia tamin'ireo fotoana niresahan'Andriamanitra tamin'ny olombelona sy ny nahatongavan'i Jesoa ary ny fitohizan'ny asa rehetra nataon'ny Apostoly sy ny Fiangonana.
Fa efa voalaza ao anaty Baiboly avokoa anefa ny zavatra hitranga rehetra toy ny fahalavoan'ny olombelona, ny fanjakazakan'i Satana avy eo, ny fahatongavan'i Jesoa izay efa nolazain'ny Mpaminany ary ny hanoheran'ny Jiosy Azy, ny fitsaganaNY ary ny fiakaraNY any An-danitra, ny asan'ny Apostoly izay avy amin'i Jesoa sy ny Fanahy Masina nirahiNY ary io mitohy hatramin'izao io ny ASANY.
Mitohy koa ary hita ao ny asa mitohy ataon'ny devoly.
Ka tsy ilay fiantso anarana no olana na io atao hoe Tompo, na Mpahary sns...
Mety halaim-panahy koa ny olona hampifandray io fandikana teny io hiroso any amin'ny fifehezana ny olona hanaraka Baiboly misy fiombonana amin'ny rehetra ny fomba fiantso ny Mpahary ary hampihen-danja ilay Soratra ao anatiny io fandravonana io. Fa na inona na inona lazaina dia tsy misy dika tokana ny Baiboly aloha no efa fantatra fa samy nanao aby na iza firenena. na iza firehana natsagan'ny mpitantana fiagonana isanisany.
Mety misy fandraisana anjaran'ny Devoly ihany ireny zavatra mampiroaroa saina ireny satria izany mihitsy ny asany, dia ny hampisafotofoto ny olona tsy hahalala an'Andriamanitra Mpahary Tompon'ny Maro araka ny voalaza, indrindra fa Jesoa Ilay Zanak'Andriamanitra izay Mpanjaka anton'izao fisian'ny Baiboly izao sy fisian'ny ady avy amin'ny Devoly izao satria aoka ho fantatra fa io devoly io anie ka te-haninana an'Andriamanitra Mpahary nefa dia tsy manana fahefana na dia kely aza fa manakorontana fotsiny no ataony.
Dia mba mila mieritreritra ihany hoe isika olombelona koa mba manana io toetra ratsy io izay nolovana tamin'ny Devoly izay mamafy izany hatrany.
endriny - 10/11/2017 07:15
Eny ho'a leiretsy.
Aleoko indray aloha mivavaka amin'ilat DEVOLY ka. Iny no mba mampilamina ny fiainako eto an-tany.
Fa ity Atra ity, efa omena rakitra isaky ny alahady mbola tsy mety voky ihany fa mangataka foana. Sady ohatran'ny maharikoriko izany ny mihevitra ilay hoe: Ity ny Rako sotroy, ity ny nofoko hoano"
RBNIR - 10/11/2017 12:35
Toy ny olona mamono tena anie izany ry endriny...
Raha izaho izao no mandinika dia otran'izao no fijeriko anao...Fantatrao tsara fa misy ny devoly, saingy ny hanina omen'ny devoly hitanao fa tsara noho ny hanina avy amin'Andriamanitra, dia hoy ianao hoe aleoko ny devoly,
Ny adinonao fotsiny.....« Aza mety hofitahina ianareo; Andriamanitra tsy azo vazivazina, fa izay afafin'ny olona no hojinjany. » (Galatiana 6:7)
Rehefa nisafidy ny hanina avy amin'ny devoly ianao dia aza manantena ny an'Andriamanitra intsony....
rhaj0 - 10/11/2017 15:50
Io ho'a ry Miharena, isan'andro vaky izao ianao manao ny "vavaka nampianarin'ny Tompo", @ ilay hoe "ameo anay anio ny hanina sahaza ho anay", ary dia "nampazahoan'Atra" tokoany ho'a ny eo ambony tsihinao, nefa ho'a toa be cholesterol sy cancerigene ireto izy eee...
- ka ianao Miharena no "Taranaka Tsy Mino Sy Ratsy Fanahy", dia namen'i Andmntra ny paquet-ny?
- sa Andrmntra mihintsy no TSY mahalala fa cholesterol/cancerigene anie ka tsy "sahaza" anao Miharena
- sa dia tena izao Andmrntra izao mihintsy ho'a no TSISY eee...
Miharena - 10/11/2017 19:27
Izay sahaza dia azo ary omeny fahasalamana maimaimpoana ihany koa isanandro ka inona no hidiran'ny homamiadana sy tsentsina lalandra amin'izany vavaka izany?
Mba asio fanavahana tsara ihany fa aza mba manao safobemantsina amin'ny fahateren-tsaina toy izany Rhaj0 a!
rhaj0 - 11/11/2017 16:18
hi hi hi.. ilay cholesterol sy cancerigene izany, miaraka @ pensée mazikan'i Miharena, tonga dia mitsoriaka mandalo ny tsinaibe fotsiny, ary dia lasa any @ ... kisoa, toa ny fataon'i Jesosy ny devoly ihany io.
Dia avy eo miverina mihinana ravi-toto sy hena-kisoa indray i Miharena, dia mikimpy mafy, dia lasa constipé, dia mivoaka @ ilay hatsembohana ilay cholestérol/cancerigene, ka "nanjary toy ny rà ny hatsembohany sady nipotrapotraka tamin'ny tany", toa ny fataon'i Jesosy rehefa mivavaka arak'i Lioka 22:44 ihany io
Miharena - 13/11/2017 10:06
Efa fantatra fa misy ireo fahatsentsenana lalan-dra ireo fa ho an'ny mino tsy hiharan'izany izy raha ny tokony ho izy satria efa manana IZAY miahy azy. Na ny sakafony aza dia efa atoro tsara fa tsy manaotao foana. Azo jerena tsara ny Soratra Masina ao amin'Isaia 22
12 Ary amin'izany andro izany Jehovah, Tompon'ny maro, Hiantso fitomaniana sy fioriana sy fiharatana ary fisikinana lamba fisaonana.
13 Kanjo he izato hafaliana sy haravoravoana! Sy famonoana omby sy ondry aman'osy ary fihinanan-kena sy fisotroan-divay! Aoka isika hihinana sy hisotro, fa rahampitso dia ho faty.
14 Dia nambaran'i Jehovah, Tompon'ny maro, teo an-tsofiko izao: Tsy havela mihitsy ambara-pahafatinareo izao helokareo izao, hoy Jehovah, Tompon'ny maro.
Ilay voatsipika io fahatsentsenana lalandra azonao amin'ny hena sy divay io.
Dia inona no avalinao azy Rhaj0!